Revy gitara eny amin’ny Trass
Hanjaka indray ny vazo an-gitara, eny amin’ny Trass Tsiadana, anio alina. Hanafana ny fotoana mantsy ry Mbola Talenta, izay fanta-daza eo amin’ny fiangaliana ny tendry ba gasy. Eo koa i Fara Gloum, anisan’ireo nandrafitra ny tarika Randrantelo, ary i Fanilo Poppins. Samy mitendry ary samy hihira avokoa ireo mpanakanto ireto. Malalaka be ny hira, satria hitety vanim-potoana amin’ny alalan’ireo vazo maro nofantenana izy ireo.
Inah etsy amin’ny PK 0 Soarano
Ao anatin’ny fampahafantarana ny rakikirany voalohany, “Ho doria” hatrany i Inah. Hiaka-tsehatra etsy amin’ny PK 0 Soarano indray ity mpanakanto ity sy ireo mpitendriny anio, manomboka amin’ny 8 ora alina. Hoentina an-tsehatra ireo hira sivy voarakitra ao anatin’ny rakikira, ankoatra ny famerenana ireo hira nahafantarana an’i Inah hatramin’izay. Ho vahinin’I Inah manditra izany ry Luk, Mahery ary Rak Roots, izay samy handray anjara amin’ny fampisehoana “Tana in love” manaraka eo.
Revy Lôlô etsy amin’ny Piment Café
Na matetika aza, andrasan’ny maro hatrany ny fiarahana amin-dry Benny, Bebey, Sammy ary Sefo. Hiverina etsy amin’ny Piment Café indray izy ireo, hitondra ny “Revy Lôlô”, anio manomboka amin’ny 9 ora alina. Ireo hira malaza, tsy maintsy hatao ihany. Na izany aza, efa mamerina tsikelikely ireo hira tsy dia fanaon’ny tarika an-tsehatra izy ireo, ary anisan’ny mahafaly ireo tena mpankafy Lôlô sy ny tariny izany.
Jazz MMC eny amin’ny Jao’s Pub
Anjaran’i Jazz MMC indray no mizara ny mozikany, anio alina, eny amin’ny Jao’s Pub Ambolonkandrina. Hitondra an-tsehatra ireo hirany malaza, indrindra ny gadona “gweta” sy “waza” ity mpanakanto anisan’ny miaka-daza amin’izao fotoana izao ity.
Elektradam eny amin’ny Is’Art Galery
Mety hanavao ny sofin’ireo tsy zatra, saingy hizara mozika hafa ny tarika Elektradam, anio, manomboka amin’ny 7 hariva, etsy amin’ny Is’Art Galery Ampasanimalo. Hita taratra ao anatin’ireo hiran’ny tarika ny talenta miavak’i Silo, izay tompon-kevitra rahateo amin’ity tarika ity.